China Square Magnetic ဆန်ခါထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများ | Meiko သံလိုက်
ရင်ပြင် သံလိုက်ဆန်ခါ ကာဗွန်နက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများ၊ ပလတ်စတစ်များ၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းစသည့်လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းနေသောပစ္စည်းများအတွင်းရှိညစ်ညမ်းမှုများကိုခွဲခြားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤရွေ့ကားယူနစ်ကိုမဆိုမည်သည့် Hopper သို့မဟုတ်ကြမ်းပြင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း, ဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျးသို့မဟုတျပြွန်များတွင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုကိုအခမဲ့စီးဆင်းစေသောထုတ်ကုန်များကိုဆန်ခါသံလိုက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သည်။
၁။ အပြီးသတ်ခြင်း။ အစားအစာအဆင့်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်ကောင်းမွန်စွာဆေးကြောခြင်းနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်း။
shell of 2. ပစ္စည်း: SS304, SS316 နှင့် SS316L ချောမွေ့သောသံမဏိပြွန်
၃။ အလုပ်လုပ်သောအပူချိန် - သံလိုက်မြက်၏ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သောအပူချိန်မှာ≦ 80 is ဖြစ်သည်။ သို့သော်မြင့်မားသောအပူချိန်လိုအပ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အထူးအသုံးချမှုများနှင့်ကိုက်ညီရန် ၃၅၀ offer အထိကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။
ရရှိနိုင် 4. အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းများ။ Standard အမျိုးအစား၊ လွယ်ကူသန့်ရှင်းသောအမျိုးအစား၊ အလွှာတစ်လွှာ၊
6. ဖောက်သည်ဒီဇိုင်းများ, သတ်မှတ်ချက်များပြည့်စုံနိုင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်များသည်ခြောက်သွေ့သောအမှုန့်များနှင့်အမှုန့်များပါ ၀ င်ပြီးညစ်ညမ်းမှုများမှာသေးငယ်ပြီးကောင်းမွန်ပါသည်။
ရှေ့သို့ Flangle Connection အမျိုးအစားရှိသောအရည်ထောင်ချောက်သံလိုက်
နောက်တစ်ခု: Multi-Rod နှင့်အတူသံလိုက်ဆန်ခါ Separator
Square Separator Grid ကိုဝယ်ပါ
Normal Square သံလိုက် Separator Grid
Rectangle သံလိုက် Grid
Rectangular Grid သံလိုက်
Square သံလိုက် Separator Grid